Madaxweynaha Puntland oo booqday xarumaha Dowladda ee degmada Bandar-beyla [Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Puntland oo booqday xarumaha Dowladda ee degmada Bandar-beyla [Sawirro]
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku sugan degmada Bandar-Bayla ee gobolka karkaar ayaa maanta 28 January 2017 kormeeray xarumaha Dawladda degmada Bandar-bayla ee gobolka karkaar, isla markaana xariga ka jaray waddo halbowle ah oo dhawaan laga hirgeliyey magaaladaasi.
Ugu horayn Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa xariga ka jaray waddo halbowle ah oo ah 1-km iyo 800 oo miter, waxaana lagu hirgeliyey dhismaha wadadani mashruca ‘’JPLG’’ kaas oo dhamaan magaaloyinka waaweyn ee Dawladda Puntland ka fuliyey dhismayaal noocan oo kale ah.
Madaxweynaha ayaa sheegay in wadadani halbowle u tahay degmada sidoo kalena ay wax wayn ka tari doonto isu socdodka iyo bilicda Magaalada, waxaana uu ku booriyey shacabka iyo maamulka degmada Bandar-bayla inay ku dedaalaan sidii ay uga wada shaqayn lahaayen wax walba oo dan u ah horumarka degmada iyo dhamaan degaanada hoosyimaada.
Munaasabadda xarig jarka kadib Madaxweynaha ayaa dhexmaray suuqa weyn ee degmada Bandar-bayla halkaas oo uu kula kulmay shacabka degmada isagoona ka waraystay baahiyahooda waxaana uu sidoo kale madaxweynuhu la kulmay qaar kamid ah shacabka ku wax yeloobey duufantii kala duwanaa ee ka dhacay xeebaha Puntland gaar ahaan xeebta Bandar-bayla isagoona Madaxweynuhu u balan qaaday in Dawladu u hirgelindoonto guryo ay ka dhigtaan deegaan si looga degel rogo meelaha ay hada degenyihiin.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sidoo kale kormeeray cusbitaalka weyn ee degmada Bandar-bayla isla markaana xadhiga ka jaray qaybta qaliinka oo dhawaan ay hirgelisey wasaarada caafimaadka waxaana uu madaxweynhu mahad balaadhan u soo jeediyey wasaarada caafimaadka Dawladda Puntland iyo maamulka cusbitaalka degmadaasi sida wanaagsan ee ay uga shaqeyeen dhismaha, qalabaynta iyo teyada shaqalada cusbitaalka.
Dhinaca kale Madaxweynaha ayaa kormeeray xarunta dugsiga farsamada waxbarashada dadban ee degmada Bandar-bayla halkaas oo ay wax ku bartaan haweenka magaaladasi iyagoona ku barta xirfadaha ay ka mid yihiin barashada ganacsiga, barashada harqaanka, falkinta Cawda, cunto karinta iyo cilaan saarka.
Kormeerka madaxweynaha ee xarumaha Dawladda ee degmada Bandar-bayla ayaa waxaa ka mid ahaa xarunta Dawladda Hoose ee degmadaasi, xarunta ayaa waxaa ay ahayd meel ay ka muuqatay qalabayn iyo mid sahashey in ay hurmariso bilicda degmada, isla markaana ay ka shaqayso baahiyaha degmada iyo degaanada hoosyimaada, intaasi kadib waxa uu madaxweynuhu kulan la qaatay xildhibaanada golaha degaanka ee degmada Bandar-bayla.
Ugu danbayn, Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dhowaan safarkiisa shaqo ugu kuurgeli doona xaalada nololeed ee ay ku sugan yihiin dadka xoola dhaqatada ah ee ka soo hayaamay Waqooyiga, Galbeedka iyo koonfurta Soomaaliya ee ku teedsan degaanada u dhexeeya degmada Bandar-bayla iyo xarunta gobolka karkaar ee Qardho.